Ọ bụrụ na ị hụrụ ndị The Epic agha na fim ị ga-ekweta na ọ bụ ihe kasị mma edinam nkiri Atiya. Legend Lore na-a oghere egwuregwu dabeere dị otú ahụ agha usoro. The agha ebe a bụ n'etiti elves, goblins na Orcs na oghere atụmatụ dị iche iche na-akpali mmasị na-agụ akụkọ dị ka akara. Nke a ise ukwu UK ohere mpere mobile egwuregwu nwere 25 nzọ-edoghi na-ofu aka na-esi anwụde. E nwere onye na-ufiop agha music ke ndabere nke na-enye a ezi uche obi na-adị na egwuregwu. The oghere a na-edoziri na backdrop ugwu na nnukwu ụlọ, na ị nwere ike ịhụ a nwere nku e kere eke na-eji ọbara na ya feathers. Ịkụ nzọ amalite na 25p ma max atọrọ naanị na £ 62,5 a atụ ogho.
Banyere Mmepụta nke Legend Lore
Nke a na-ufiop The Epic agha dabeere oghere egwuregwu e mepụtara site 1×2 Cha Cha (NYX). Ha bụ otu nke na-eduga Ịgba Cha Cha ụlọ ọrụ na ọgaranya ahụmahụ na-eke dị iche iche oghere egwuregwu n'ihi na online cha cha saịtị. Ha egwuregwu na-playable dị iche iche internet nyeere ngwaọrụ dị ka mobiles na mbadamba.
a UK ohere mpere mobile egwuregwu atụmatụ ihe nnọchianya nke dị iche iche na-agụ akụkọ tinyere anọ elvish dike. Ha na-Arior, iwu, Derec na Caldor tinyere akara nke a goblin, ụta & aro, ọlaedo agha na a nwere nku anụmanụ. Derec bụ ihe nnọchianya nke a dike na-akwụ ndị kasị elu n'osisi 500x n'elu ise nke ya ụdị ọdịda gafee ifịk payline. E nwere atọ akụkụ pụrụ iche akara na-anọchite anya Elvish eze aha Aliendor, Adaeze Silvertawn na ihe orc aha ya bụ Bonecrack.
Bonecrack daashi: Mgbe ihe nnọchianya nke orc egosi atọ ma ọ bụ karịa ugboro n'oge a atụ ogho, ị na-e n'ime a bonus gburugburu. Ebe a random dike na-egosi na ihu na-orc na a swordfight. Ná ngwụsị nke gburugburu, na ị na-ọdịda a ụgwọ ọrụ dabere na otú ihe ọma gị dike ka agha.
Wild Daashi Njirimara: The warrior Adaeze, Silvertawn bụ anụ nnọchianya nke a UK ohere mpere mobile game. Ọ na-anọchi niile isi na akara ma e wezụga ọkpụkpụ mgbape na eze na akara. Ise nke anụ ọhịa akara gafee a payline akwụ gị a eto mmeri nke ruo 7500 mkpụrụ ego kwa.
Gbasaanụ daashi: Aliendor eze bụ ikposa nnọchianya nke a UK ohere mpere mobile game. Mgbe atọ ma ọ bụ karịa nke a na akara ala n'oge a atụ ogho, na ị na-ọdịda iri free spins. All na winnings n'oge ndị a spins na-okpukpu atọ.
Na a breathtaking ndịna na ebube isiokwu, this UK ohere mpere mobile game awade n'oké ntụrụndụ. E nwere ọtụtụ bonus ụgwọ ọrụ na i nwere ike imeri kwa.